Candy Crush အဆင့် 1442 cheats နှင့်သိကောင်းစရာများ - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / Candy Crush ဂိမ်း / Candy Crush အဆင့် 1442 cheats နှင့်သိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ နိုဝင်ဘာ 11, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
Candy Crush အဖျားမကြာမီအချိန်မကျတော့ပါ, နှင့်လူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိစောင့်ရှောက်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုမြင့်တက်နေပါတယ်. ၎င်းသည်ဆိုးဝါးသောကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပျော်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ခက်ခဲအဆင့်ဆင့်ဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပိုင်းအစကိုသင့်အား Candy Crush Level ပေးရန်ကြံစည်ခဲ့သည် 1442 cheats နှင့်သိကောင်းစရာများ!
Candy Crush ၏အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ မြင့်မားသောအဆင့်များတွင် အလွယ်တကူဖြေရှင်း၍မရသောထူးခြားသောအသွင်အပြင်အချို့ရှိသည်။. ၎င်းသည် သာမန်လူစုလူဝေးထက် ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြိုင်အဆိုင်ရရှိရန် စိတ်အားထက်သန်သော ပုံမှန်ကစားသမားများကို အခွင့်အရေးပေးသည်။. ကစားသမားများသည် အမှန်တကယ်စိန်ခေါ်သည့် ရည်မှန်းချက်များနှင့် သင့် noggin ကို အသုံးပြုစေသောအခါတွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့် အနိုင်ရသည့်အမူအရာတို့ကို စိန်ခေါ်သည်.
ဆဲတယ်။, ဂိမ်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။; ယခု, နောက်ထပ် ado မရှိဘဲ, တွင်းတူးကြပါစို့.
Candy Crush Saga ၏ Level-1442 ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ hazelnut တစ်လုံးနှင့် ချယ်ရီသီးတစ်လုံးတို့ကို စုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။. ဒီမှာဖမ်းပါတယ်, မင်းလုပ်ရမှာ 20 ရွေ့လျား; ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်, there are two locks that need to be unlocked and there are jelly makers at the bottom that keep spawning jellies to block your path. The collection points are at the bottom and getting the ingredients there has proven out to be one hectic task.
မကောင်းသော သားပေါက်ကလေးများသည် အဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေပြီး ဂျယ်လီများ ပြည့်သွားသည်နှင့် လွှတ်လိုက်ကြသည်။. ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့ကို ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုတွင် အဆက်မပြတ် ပြတ်တောက်ကာ ဖျက်ဆီးပစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။.
Candy Crush အဆင့် 1442 သိကောင်းစရာများနှင့်လှည့်ကွက်:
အဆင့်က ခက်ခဲပေမယ့် မကျော်ဖြတ်ခင်မှာ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားရပါတယ်။, အောက်ဖော်ပြပါ သင်တွေ့ရမည့် အကြံပြုချက်များသည် တတ်နိုင်သမျှ အနည်းငယ်ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ဤအဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။.
မကောင်းသော သားပေါက်ကလေးများကို အာရုံစိုက်ထားပါ။. ၎င်းတို့ဘေးတွင် ကပ်ပါ သို့မဟုတ် ချွတ်ထားသော သကြားလုံးများကို နှောင့်ယှက်ရန် မြင့်မားသောအထိကို အသုံးပြုပါ။. သုံးကြိမ် တပြိုင်နက် ပြတ်တောက်သွားသည်။, မျိုးပွားခြင်းကို ရပ်တန့်ကြလိမ့်မည်။.
သကြားလုံးသော့များဖြင့် သော့ခတ်ထားသော သေတ္တာများကို သေချာစွာသော့ဖွင့်ပါ။. ၎င်းသည် သင့်အား မကောင်းသော သားပေါက်များကို နှောင့်ယှက်ရန် အစင်းကြောင်းသကြားလုံးပြုလုပ်ရန် ဘယ်ညာလှည့်နိုင်သည့် အုန်းဘီးနှစ်ဘီးကို သင့်အား ပေးလိမ့်မည်.
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။, အောက်ခြေရှိ ပိုက်ကောင်များကို ငါးကြိမ်ထိ ရှင်းပစ်ရန် ကြိုးစားပါ။.
၎င်းသည် ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု စတင်မည်ဖြစ်ပြီး သားပေါက်ကောင်များအားလုံး ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။.
ထိပ်ထက် အောက်ခြေမှာ ကစားပါ။. ၎င်းသည် လှုပ်ရှားမှုအသစ်များနှင့် အထူးသကြားလုံးများကို ဖန်တီးရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။.
လက်ဝဲရွေ့လျားမှုအရေအတွက်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။. ကစားသမားများ အမှားလုပ်မိသည့် အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့သည် လှုပ်ရှားမှုမရှိသည့်အချိန်၌ပင် သတိမပြုမိဘဲ ဂိမ်းတွင် ဆုံးရှုံးသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။.
သင်လုပ်နိုင်လျှင်, ထို့နောက် အစတွင် သင်ရွေးချယ်နိုင်သော အထူးသကြားလုံးများကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။. သင့်တွင် အကန့်အသတ်ရှိသော လှုပ်ရှားမှုများ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။, အားကောင်းလာမယ် မထင်ဘူးလား?
ဒါကြောင့်, ဒါတွေအားလုံးက မခက်ပါဘူး။? မွေးမြူရေးသမားများကို ဖျက်ဆီးပါ။, သကြားလုံးသေတ္တာများကိုဖွင့်ပါ။, ချယ်ရီနှင့် hazelnut စုဆောင်းပါ။, သွားလို့ကောင်းတယ်။. လာမယ့်အချိန်တိုင်အောင်, နေကောင်းတယ်!!!